May | 2012 | Myanmar My Always
Ralph Nader: Obama At Large And Where Are The Lawyers? – OpEd
By: Ralph Nader May 31, 2012 (EURASIA REVIEW) The rule of law is rapidly breaking down at the top levels of our government. As officers of the court, we have sworn to ‘support the Constitution,’ which clearly implies an affirmative commitment … Continue reading →
“ရခိုင်စေတီပုထိုးများအရေး ဘယ်သူမှစိတ်မအေးပါ” စနေနေ့ကထင်တယ်၊ ရခိုင်ဖက်က ရှေးဟောင်းဘုရားစေတီတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်မအေးစရာ သတင်းတွေကြားရတယ်။ ရေဒီယိုအင်တာဗျူး အမေးအဖြေခန်းမှာ တနင်္ဂနွေနေ့အထိ ပါလာတာတွေ့ရတယ်။ စိတ်ပူမယ်ဆိုရင် အင်မတန်ပူသင့်တဲ့ သတင်းပါပဲ။ စေတီပုထိုးတွေ နန်းမြို့ဟောင်းတွေနဲ့ မလွတ်တဲ့ မီးရထားလမ်း ကားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်တာတွေဟာ ဘာဆင်ခြေမှမပေးနဲ့၊ မလုပ်သင့်ဘူး။ ဒီလို ရှင်းရှင်းမြင်နိုင်ရမယ်။ ဒီရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေနဲ့ လွတ်အောင် လမ်းအူကြောင်းမရှာနိုင်ရင် အဲဒီအင်္ဂျင်နီယာတွေကို အလုပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်လို့ပဲ ပြောစရာရှိတယ်။ တောင်နဲ့မလွတ်ရင် တောင်နံရံကနေဖောက်၊ လှိုဏ်ခေါင်း တူးတန်တူး၊ မြေအောက်လျှိုးတန်လျှိုး။ ကေတုမတီတောင်ငူနန်းမြို့ရိုးကို ဖြတ်ပြီး … Continue reading →
မောင်းထုတ်တာမခံချင်ရင် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ခပ်မြန်မြန် ကြွကြပေတော့
Posted on May 4, 2012	by nyuntshwe
ကုလားချွဲ လာချွဲမနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မြန်မာမှာ မရှိ၊ ပိန်းပိန်းပိတ်မရှိ နတ္ထိ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ အရှင်းဆုံးပြောရရင် အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံကနေ အဓိကအားဖြင့် ၁၈၂၄-၂၆ ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲပြီးကတည်းက အသုတ်လိုက် ဒီလှိုင်းကြီးများပမာ ဝင်လာကြတဲ့ ခေါ်တောတွေ၊ ကုလားဒိန်တွေဖြစ်တယ်။ ခုထိလဲ ကူလီကူမာနဲ့ ဝင်နေတုန်းပဲ။ ၁၉၄၈ မတိုင်ခင်တုန်းကတော့ အိန္ဒိယတိုင်ငယ်နဲ့ ကိုလိုနီတစ်ဦးထဲကအုပ်ချုပ်တာဆိုတော့ နိုင်ငံသားပြဿနာမပေါ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက ဒီကုလားတွေ ခေါ်တောတွေ ကုလားဒိန်တွေဟာ တရားမဝင် ခိုးဝင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်။ ဒီကုလားမျိုးစုံဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေပဲ။ အိန္ဒိယပြည်မကြီးက ကုလားတွေကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားကြတယ်။ သူတို့အများစုက ဟိန္ဒူတွေ၊ … Continue reading →
ကိုမင်းဇင်အင်တာဗျူးမှ အတွေးဆန့်ကြည့်ခြင်း ၁။ အမေးနွားကျောင်းသား အဖြေဘုရားလောင်းတဲ့ ကျနော်တင်စားလိုက်တာ လွန်များသွားရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ ဒီမနက် ဘီဘီစီက ယူစီအယ်အေ တက္ကသိုလ်လားဗျာ၊ အဲဒီမှာ မာစတာလား၊ ပါရဂူလား တက်နေတဲ့ ယခင်က ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းမှာ အယ်ဒီတာလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုမင်းဇင်ကို အင်တာဗျူးသဗျ။ စည်းလုံးအားကောင်းတဲ့ အာဏာရှင်လက်ထဲကနေ ဒီမိုကရေစီအဖြစ် ပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာ နားလည်ချင်သူတွေ နားထောင်ကြည့်သင့်တယ်ဗျာ။ ကိုမင်းဇင်က တိုက်ရိုက် မပြောပေမဲ့ ဒီသဘောပဲဖြစ်တယ်လို့ နားလည်နိုင်တယ်ခင်ဗျ။ အခုမြန်မာပြည်အပြောင်းအလဲမှာ ပိတ်ဆို့မှုဟာ အင်မတန်အရေးပါခဲ့တယ်လို့ လက်ခမောင်းခတ်(ဟန်)ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကနေဒါဝန်ကြီးကိုလဲ မရည်ရွယ်ပဲ အရှိုက်ထိုးမိလျက်သားဖြစ်သွား … Continue reading →